Maitiro ekugadzirisa PayPal mu PrestaShop, nhanho nhanho | ECommerce nhau
Kuti uwane kuti sei gadzira PayPal mu PrestaShopIsu tichatanga kutaura pamusoro pemaonero maviri aya. Kune avo vasingazive kuti ndezvei, PayPal inoumbwa neinternet yekubhadhara system yezvivakwa zvitoro. Kubudikidza neiri peji iwe unogona kubhadhara pakarepo kana uchitenga chigadzirwa muchitoro chepamhepo.
Parizvino, PayPal ndeimwe yeiyo inonyanya kufarirwa uye inonyanya kushandiswa online ekubhadhara masisitimu pamusikaIzvi zvinokonzerwa nekureruka kwayo kwekushandisa uye kushanduka kwazvinopa kuitira kuti tikwanise kuishandisa senzira yekubhadhara yedhijitari, pamusoro pedzimwe nzira dzechinyakare senge makadhi echikwereti.
Y PrestaShop iri hombe yemahara ecommerce software, nenzira iyo vashandisi vayo vanogona kumisikidza zvitoro zvepamhepo nenzira yakapusa uye inoshanda, kubvisa mhando dzese dzezvipingamupinyi zvehunyanzvi uye zvemari izvo zvinowanzo fanirwa parudzi urwu rwebhizinesi.
PrestaShop yanga ichishanda zvinobudirira kubvira 2007, kuva nhasi uno unozivikanwa pasi rese e-commerce mhinduro, ine anopfuura 165,000 zvitoro zvepamhepo kutenderera pasirese.
1 Nzira yekugadzirisa PayPal mu PrestaShop?
2 Gadza PayPal mu PrestaShop 1.6
2.1 Paypal account:
2.2 API siginecha:
2.3 Kupinda kuPayPal:
2.4 Zviratidzo zveAPI:
2.5 Kumbira siginicha yeAPI:
2.6 API zita uye password uye siginecha:
3 Gadza PayPal mu Prestashop 1.7
3.1 Kuiswa kwePayPal module muPrestaShop 1.7.
3.2 PayPal module interface muPrestaShop 1.7
3.3 Kugadziriswa kweiyo PayPal module mu Prestashop 1.7
3.4 Kugadziriswa kweiyo PayPal module mu PrestaShop
Nzira yekugadzirisa PayPal mu PrestaShop?
Mutsumo unotevera, tichaona matanho ekutevera kuita iyo PayPal kumisikidzwa mune dzazvino vhezheni dzePrestaShop, vhezheni 1.6 yakaburitswa munaKurume 2014 uye vhezheni 1.7 yakaburitswa munaNovember 2016.
Gadza PayPal mu PrestaShop 1.6
Kuita iyo PayPal PrestaShop module yekugadzirisa zvakakosha kuti panguva iyoyo isu takagadzira iyo PayPal account, izvo zvakakosha kuti uenderere mberi nehurongwa hwe kumisikidzwa kwemodule yekubhadhara nePayPal muPrestaShop.
Tevere isu tichaenda kududziro iyo main matanho ekugona kumisikidza Paypal muPrestaShop
Icho chiri pamusoro nhanho nhanhatu dziri nyore izvo zvinotibvumidza isu kuita iyi nzira nekukurumidza uye pasina mikukutu mikuru.
Sezvambotaurwa pamusoro, kuve nePayPal account yakatogadzirwa ichave iri yekutanga nhanho yakakosha yekumisikidza nePrestaShop. Pamusoro pechinongedzo chekutanga cheiyo bar yekumisikidza, tinogona kuona mubvunzo: Iwe unotove uine PayPal Bhizinesi account?
Kumubvunzo uyu tinofanirwa pindura zvakanakaZvakanaka, panguva iyoyo tinofanirwa kuvhara ichi chinodiwa pasina dambudziko.
Nhanho inotevera ine chekuita neiyo Kuwana iyo API siginecha, kwatichaenda takananga kunhanho yechitatu yegadziriro, iyo yakanzi "Ita kuti chitoro chako chepamhepo chigamuchire kubhadhara kwePayPal".
Kumberi zvishoma pasi tinogona kuonawo bhawa reoranjisi rinonzi "Tora yangu PayPal ruzivo rwekuzivisa«, Mukati medu isu tinodzvanya kuti tienderere mberi nemaitiro uye toenda kune wechitatu nhanho yegwaro iri.
Mumufananidzo unotevera tinogona kucherechedza zvakadzama pfungwa yechitatu yeiyo PayPal yekumisikidza peji, uko iwe kwaunogona zvakare kuona iro reorenji bhatani iro isu tinofanirwa kudzvanya kuenderera.
Mushure mekupa tinya bhatani reorenji, Iwindo rinowoneka richitibvunza pinda muPayPal, sekungoonekwawo mumufananidzo wapfuura.
Ticha kupinda Chete nekupinda email uye password iyo yakagadzirirwa iyo PayPal bhizinesi account.
Kana iyo data yapinda, isu tinongofanirwa kuwana nekudzvanya bhatani "Log In", yatinenge tave kufambira mberi padanho rinotevera redudziro iyi.
Kuti uite iyo kubhadhara muchitoro chepamhepo, Izvo zvakakosha kuti isu tive nemazita eAPI, ayo atinogona kukumbira mukumisikidzwa kwe Zviratidzo zveAPI uye mvumo, inova chikamu chesarudzo yechipiri yeAPI Access, sezvatinoona yakaratidzwa mumufananidzo unotevera:
Sezvinoonekwa, izvi sarudzo inogona kuiswa kune akasarudzika mawebhusaiti uye internet zvitoro, pamwe nekutenga ngoro pre-dzakabatanidzwa pane yako wega server. Saizvozvowo, sezvakaratidzwa mumufananidzo wakataurwa, tinofanirwa kusarudza yekubatanidza chinongedzo chechipiri, icho chinonzi "Kumbira zvitupa zveAPI."
Kumbira siginicha yeAPI:
Gare gare, kamwe iyo Zviratidzo zveAPI, Iyo peji panonzi chikumbiro chinoitwa ichavhurwa, mairi zvichazoratidzwa kuti iyo Zviratidzo zveAPI zvine zvinhu zvitatu zvakakosha:
Zita rekushandisa re API
Siginecha yeAPI kana chitupa chevatengi cheAPI SSL
Pane ino peji nyowani, sezvaungaona mumufananidzo unotevera, tichazoratidzwa sarudzo mbiri dzakasiyana: "Kumbira siginicha yeAPI" uye "Kumbira Chitupa cheAPI".
Mune ino kesi, isu tinofanirwa kutarisisa yekutanga sarudzo, iyo inotibvumidza isu kukumbira iyo siginecha yeAPI. Kana bhokisi iri rasarudzwa, isu tinongofanirwa kubvuma nekutumira kuti tienderere mberi nehurongwa.
Icho chinotevera chifananidzo ruzivo ruzivo rwakapihwa mune ino nhanho yemutungamiri.
API zita uye password uye siginecha:
Sechikamu chechitanhatu, mushure kumbira siginecha API, Chidzitiro chichaonekwa nerinotevera ruzivo:
Zita rekushandisa re API:
Kune rimwe divi rechimwe nechimwe chezvikamu izvi, tinogona tinya bhatani "Ratidza" kuitira kuti ruzivo rwe data yega yega ruratidzwe, izvo zvinonyanya kukosha kuita inotevera uye yekupedzisira maitiro eiyi PayPal yekumisikidza gwaro muPrestaShop.
Tevere, tinogona kuona mumufananidzo unotevera izvo zvakatsanangurwa kare.
Sezvakaratidzirwa nguva yadarika, kuti tione ruzivo rwe data rwakaratidzwa pane ino peji, isu tinongofanirwa kupa tinya bhatani "Ratidza", izvo zvinoita kuti ruzivo rwakakodzera ruwonekwe nenzira yemakodhi mune dzimwe nguva.
Yakati data inofanira kunge iri kuteedzera uye kunamirwa mumunda wakakodzera wepfungwa yechitatu yeiyo module yekumisikidza peji, iyo yatakakwanisa kuongorora zvekare mudanho rechitatu rebhuku rino.
Tevere, mumufananidzo unotevera tichaona iyo poindi, yatove neruzivo rweSiginecha rwakazadzwa neruzivo rwakawanikwa pakutanga kwechitanhatu chegwara remutungamiri wedu.
Sezvatove zvaratidzwa, muchikamu chino zvichazongodiwa kuti unamate ruzivo rwakakodzera mu yakaratidza chikamu che "Signature". Dzimwe sarudzo dzekumisikidza dzichasiiwa sezvavari, uyezve tinokwanisa kudzvanya pane bhatani rekuchengetedza iro riri pazasi peji.
Nezve izvi isu tichava tapedza kumisikidza kwePayPal module muPrestashop, mune vhezheni 1.6.
Gadza PayPal mu Prestashop 1.7
Kuiswa kwePayPal module muPrestaShop 1.7.
Zvichienderana neshanduro yePrestashop 1.7 yatinobata, tinogona kunge tisina iyo Paypal module yakaiswa. Saka pazasi isu tine zviitiko zviviri zvakasiyana.
A) PayPal module yakaiswa:
Kuti tione kuti isu tatova neiyo PayPal module yakaiswa, tinogona kuenda ku "GADZIRA" tebhu, kwatino pinda ma "Module", uye "MaModule uye masevhisi", uye pakupedzisira tinodzvanya pane "Akaiswa ma module".
Gare gare, tinogona kukurumidza kutsvaga iyo PayPal module nekudzvanya iyo CTRL + F kiyi uye typing paypal mubhokisi rekutsvaga. Saka tinogona kutarisa kana isu tatova neiyo module yakaiswa, uye kana zvirizvo, ingobaya pazwi rinoti "Gadzira"
B) PayPal module haina kuiswa:
Kana PayPal isingaoneke mu "Akaiswa ma module", zvinoreva kuti ichafanirwa kuiswa. Kuti tiite kumisikidza, isu tinotanga nekuita zvakafanana maitiro sekutsvaga kwako.
Kutanga, isu tinopinda iyo "GADZIRA" tebhu, uye "MaModule", uye kubva ipapo kuenda ku "MaModule uye masevhisi", uye tinya pane iyo "Sarudzo" tebhu. Tichatsvaga iyo "PayPal" module, iyo yatinozopinda kuburikidza ne "Isa" bhatani.
Mumufananidzo unotevera tinogona kuona danho iri:
PayPal module interface muPrestaShop 1.7
Iye zvino zvatogona - gadzirisa iyo yekumisikidza iyo PayPal module, tinogona kuona maviri tabo: "Zvigadzirwa" uye "Kugadziridza".
Saizvozvo, isuwo tinogona kucherechedza sarudzo mbiri dzakasiyana dzekumisa: "Paypal" uye "Braintree". Pakati pevaviri ava, tiri kuenda kusarudza sarudzo "Paypal" inova ndiyo inotifadza. Kugonesa uye kumisikidza yakajairwa PayPal.
Kugadziriswa kweiyo PayPal module mu Prestashop 1.7
Kuti tigadzire kumisikidza, isu tinongofanirwa kuita chete tinya pane "Activate" bhatani, iyo inowanikwa mukatekete kuruboshwe, iyo yakatsaurirwa kuPayPal uye iyo inotipa mukana weiyo peji rePayPal, uko chete isu tinofanirwa kuisa yedu email kugadzira account, kana kusaina kuPayPal account yatogadzirwa kare, uye kana izvi zvaitwa, isu tinosarudza iyo nyika yekwatangira iyo iri mune yakasarudzwa iri pazasi, uye gare gare, tinobaya pane bhatani rekuenderera.
Mushure meizvozvo, mufananidzo uchaonekwa iyo yambiro yekupa mvumo kunyorera kushandiswa kwedu kiyi dze API uye nekudaro kukwanisa kusangana nePayPal.
Kuti tirambe tichiita izvi tinofanirwa kupa mvumo, tichishandisa bhatani "Hongu, ndinopa mvumo yangu.", kunyangwe zvikaitika mune imwe yeanotevera kesi mbiri:
Mushure mekubvuma, rimwe hwindo rinozovhura risingatarise kuti mvumo yabudirira.
Ipapo inotevera nhanho ichave - dzokera kumagadzirirwo ePayPal module yekuisa kwedu kwePstaShop, uchishandisa bhatani "Dzokera kuPrestaShop kana zvakare "Dzokera ku202 e-commerce", mushure meizvozvo chinyorwa chichaonekwa patinozosimbisa kuti isu takanyatsobatanidza PayPal nePrestashop, pamwe nemutsara wemirairo yekutsigira email kero uye kuziva kana paine kutenderera kutadza mumirairo.
Kugadziriswa kweiyo PayPal module mu PrestaShop
Mushure mekubatanidza iyo PrestaShop 1.7 PayPal module nePayPal account, isu tichawana mune iyo tebhu "Kugadziriswa" kweiyo PayPal module, kwatinofanira kugadzirisa zvinotevera sarudzo dzekumisikidza seinotevera:
Shandisa sandbox: Mumusarudzo tinopinda sarudzo "Kwete", kuitira kuti tigone kugamuchira chaiko kubhadhara pane bvunzo.
Kubhadhara chiito: Tichasarudza sarudzo "Kutengesa", inova ndiyo yakajairwa nzira yekutengesa nePayPal
Ratidza PayPal mabhenefiti kune ako vatengi: Zvinokurudzirwa kusarudza chikamu ichi nesarudzo "Hongu", nekuti kana tikachimisikidza, apo mutengi anosarudza nzira yekubhadhara, anogara achikwanisa kuona ruzivo nezve zvakanakira kubhadhara nePayPal.
Pfupi Yakagoneswa: Pano, isu tinopinda iyo sarudzo "Kwete", inoenderana nekumisikidza kwePayPal kubhadharira kubhadhara.
Yakagoneswa mumamiriro ezvinhu: Pano isu tichaisawo sarudzo "Kwete".
Kana tangoita shanduko idzi, tinogona tinya bhatani "Sevha" Uye saka Tichava tatova neyedu PayPal module yakagadzirirwa uye yakabatana nePrestaShop 1.7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Nzira dzokubhadhara » Gadza PayPal mu PrestaShop
Maria Laura akadaro
Chii chinonzi Amazon?